China graphite yevhu Kukuru Mukutonga kwechigadzirwa Mugadziri uye mutengesi | Jinglong
Iyo graphite yevhu Kukuru Mukutonga kwechiFascist ine yakazara huwandu hwesananguro kubva 1 # kusvika 1500 #. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro mbishi zvinhu uye yepamusorosoro fomula, graphite yevhu Kukuru Mukutonga kwechivande ine zvakanakira dzakakwirira arambe achirema, ngura nemishonga, mukuru tembiricha nemishonga, kutsanya conduction, yakasimba oxidation nemishonga, mukuru chafariz kuvhunduka nemishonga, yakatsiga makemikari kuita, yakanaka chimiro, yakasimba , nezvimwe.
Iine hwaro hwakagadzikana uye hwakavimbika, inonakidzwa nemusika wakanaka nguva dzese. Icho chinodikanwa mudziyo wekusina-ferrous simbi kukanda uye kukanda. Panguva imwecheteyo tinotsigira kugadzirwa kwe graphite chubhu, graphite pad uye zvimwe zvigadzirwa, uye kugadzira zvakasarudzika-zvakaumbwa graphite zvigadzirwa zvinoenderana zvakasiyana requir ements.
Chinhu Standard Paramende Bvunzo Dhata
Carbon Zvemukati ≥ 38% 41.46%
Kukosha Kusaziva 35% 32%
Kuwanda kwehuwandu 1.6g / cm³ 1.71g / cm³
Graphite Clay Kukuru Mukutonga kwechiFascist * Specification
Tsanangudzo (D) Dhayamita Yekunze Yekunze (H) Kureba Kwese (d) Dhayamita Yekunze Yekunze
Ongorora: Izvo zvirevo zviri pamusoro ndezve mareferenzi chete, saizi chaiyo yechigadzirwa ichakunda, uye yakagadziridzwa yakakomberedzwa-yakafanana nechero inogona kuwanikwa.
Zvinyorwa zvekushandisa graphite crucibles
1. Iyo Kukuru Mukutonga kwechiFascist inofanira kuzara mune yakaoma mamiriro
2. Takura mbichana zvishoma
3. Warm ari Kukuru Mukutonga kwechiFascist mumuchina wekuomesa kana padyo nechoto. Tembiricha yekudziya inofanirwa kusvika pa500 ℃.
4. The Kukuru Mukutonga kwechiFascist inofanira kuiswa pasi muchoto mwedzi sandara.
5. Kana iwe ukaisa simbi mukati mukurovererwa, iwe unofanirwa kutora iyo inogona kurovererwa seyako mareferensi. Kana Kukuru Mukutonga kwechiFascist rizere, zvichava kukuvara kuwedzera.
6. Iyo inosunga chimiro inoda seiya yeiyo yekurovererwa. Dzivisa iyo yekumanikidza yakamanikidzwa kuparadza iyo inoyambuka.
7. Chenesa mbichana nguva dzose uye zvishoma.
8. Iyo Kukuru Mukutonga kwechiFascist inofanira kuiswa pakati pechoto uye ichisiya imwe nhambwe pakati peiyo crucible nevira.
9. Shandura chinokunda kamwe muvhiki imwechete uye izvi zvichabatsira kurebesa hupenyu hwebasa.
10. Iwo murazvo haufanire kubata chinozunguzika chaipo.
11.Maawa makumi maviri nemana kushandiswa nguva dzese kuchaita kuti zviputi zvive nehupenyu hwakareba hwebasa.
Pashure: UHP Electrode
Zvadaro: Pyrolytic graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist